Babylona Misitery. BNL Ministries - mg24
Vehivavy iray nitafy volomparasy sy jaky,manana kapoaka volamena eny an-tanany mipetraka eo amin'ilay bibidia.
Ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy fito izay nanana ny lovia fito, dia niteny tamiko nanao hoe: Avia atỳ; dia hasehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe, izay mipetraka eny ambonin'ny rano maro, dia ilay nijangajangan'ny mpanjakan'ny tany, sady mamon'ny divain'ny fijangajangany ny mponina tamin'ny tany. Dia nentiny tany an'efitra tamin'ny Fanahy aho ary nahita vehivavy nitaingina bibidia mivolon-jaky, feno anarana fitenenan-dratsy sady nanan-doha fito sy tandroka folo. Ary ravehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vato soa ary perila sady nitana kapoaka volamena teny an-tànany, feno zava-betaveta sy zava-maloton'ny fijangajangany;
Izy dia Babylona lehibe, ilay renin'ny fahavetavetana rehetra.
Ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny handriny nanao hoe: ZAVA-MIAFINA, BABYLONA LEHIBE, RENIN'NY MPIJANGAJANGA SY NY FAHAVETAVETANA AMIN'NY TANY. Ary hitako ravehivavy mamon'ny ràn'ny olona masina sy ny ràn'ny martioran'i Jesosy; koa raha nahita azy aho, dia akory ny hagagako. Ary hoy ilay anjely tamiko: Nahoana no gaga ianao? Holazaiko aminao ny zava-miafina ny amin-dravehivavy sy ilay bibidia mitondra azy, izay manan-doha fito sy tandroka folo. Ny bibi-dia, ilay efa hitanao, dia nisy ary tsy eo izao, ary hiakatra avy ao amin'ny lavaka tsy hita noanoa izy ka ho lasa ho amin'ny fandringanana; ary ireo monina ambonin'ny tany dia ho gaga, izay ny anarany dia tsy voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainana hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao, rehefa mijery ilay bibidia izy ireo, izay nisy ary tsy eo izao, nefa mbola ho avy indray.
Ny hevitry ny loha fito sy tandroka folo.
Ary eto ny sain'izay manana fahendrena: Ny loha fito dia tendrombohitra fito, izay ipetrahan-dravehivavy. Ary misy mpanjaka fito; efa lavo ny dimy, ka ny iray mbola, ary ny iray mbola tsy tonga; ary rehefa tonga izy, dia tsy maintsy mitoetra kelikely. Ary ny bibi-dia izay nisy ary tsy eo izao, eny izy no fahavalo, naman'ny fito dia lasa any amin'ny fandringanana. Ary ny tandroka folo, izay hitanao, dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana; fa mandray fahefana ho toa mpanjaka, iray ora miaraka amin'ny bibidia izy. Ireo dia miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibi-dia.
Ny Fandresen'ny Zanak'Ondry.
Ireo dia hiady amin'ny Zanak'ondry, ary ny Zanak'ondry haharesy azy, satria Tompon'ny tompo sy Mpanjakan'ny mpanjaka Izy, ary ireo izay miaraka Aminy dia nantsoina, nofidiana ary mahatoky. Ary hoy izy tamiko: Ny rano efa hitanao, izay ipetrahan'ilay vehivavy janga, dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro samy hafa fiteny. Ary ny tandroka folo sy ny bibidia izay efa hitanao, dia ireo no hankahala ilay vehivavy janga ka hanao tsinontsinona sy hampitanjaka azy ary hihinana ny nofony ka handevona ny tenany amin'ny afo. Fa Andriamanitra efa nametraka tao ampon'izy ireo mba hanatanterahany ny sitrapony, sy hifanara-tsaina ary hanome ny fanjakany ho an'ilay bibidia mandra-pahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra. Ary ilay vehivavy hitanao, dia ilay tanàna lehibe, izay manjaka amin'ny mpanjakan'ny tany.
Iza io Babylona Misitery io?
Ny fahafantarana io Vehivavy io dia azo atao amin'ny fijerena ireto zava-misy ireto ao amin'ny Soratra Masina.
1. Izy dia Vehivavy. (Fiangonana)
2. Izy dia Tanàna.
3. Izy dia manjaka amin'ny mpanjakan'ny Tany.
4. Izy dia tsara tarehy.
5. Izy dia mipetraka amin'ny tendombohitra fito.
Maro ny tanàna no mipetraka eo amin'ny tendrombohitra fito, fa iray ihany no manjaka, ary izany dia Fiangonana, -ROMA.
Ampidiro (PDF Anglisy) Why I am against Organised religion.
(Ny Taom-Fiangonana Fito.)